WEERARRADA ARGAGIXISADA OO HOOS U DHACAY SANADKII 3AAD OO XIRIIR AH - Latest News Updates
WEERARRADA ARGAGIXISADA OO HOOS U DHACAY SANADKII 3AAD OO XIRIIR AH
Warbixin ay wadajir u soo saareen Midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa lagu sheegay in uu hoos u dhac ku yimid weerarrada waxa loogu yeero argagixisada ee Caalamka oo dhan saddexii sano ee la soo dhaafay.
Weerarradii dhacay 2017kii waxaa ay 23% ka yaryihiin kuwii dhacay sanadkii ka horreeyya ee 2016kii,waxaana ka dhashay khasaare ka yar kii sanadkaas ka horreeyay.
Sanadkii 2017,waxaa dhacay 8,584 oo weerar Caalamka oo dhan, marka la bar bar dhigo sanadkii 2016ki oo ay dhaceen 11,150 oo weerar ah,waxaana dhimashada ka yartahay 7,000 oo qof.
Weerarradaas waxaa ay ka dhaceen 100 dal oo kala duwan,waxaase ugu darnaa shan dal oo kala ah, Ciraaq,Afghanistan, Hindiya,Pakistan iyo Philippines,waxaana ka dhacay 59% weerarradii la fuliyay 2017kii.
Dalalka ugu badan ee ay ka dhacday dhimashada waxaa ay kala yihiin; Afghanistan, Ciraaq, Nigeria, Somalia iyo Syria.
Weerarrada ugu badan waxaa geystay Daacish,waxaase u muuqataa in lagu jebiyay dagaalka Ciraaq iyo Syria iyada oo weerarradeed ay hoos u dhaceen 23%,sidoo kale dhimashada ayaa hoos u dhacday 53%.
Iyada oo warbixinta ay xuseyso in weerarrada iyo khasaaraha ka dhashay sanadkii 2017kii ay hoos u dhacday haddana waxaa jira dalal ay aad u kordheen weerarrada iyo dhimashadaba waxaana ka mid ah; Masar oo ay dhimashada korodhay 124%, Soomaaliya oo ah 100%, iyo Philippines oo ah 20%.